အန် တွမ် နီ ဟေး နဲ့ မြန် မာ အ သင်း ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ပြနိုင်မလဲ !!! - Thadin
HomeNEWSအန် တွမ် နီ ဟေး နဲ့ မြန် မာ အ သင်း ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ပြနိုင်မလဲ !!!
အန် တွမ် နီ ဟေး နဲ့ မြန် မာ အ သင်း ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ပြနိုင်မလဲ !!!
September 30, 2018 kanhtoo shin NEWS Comments Off on အန် တွမ် နီ ဟေး နဲ့ မြန် မာ အ သင်း ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ပြနိုင်မလဲ !!!
အန် တွမ် နီ ဟေး နဲ့ မြန် မာ အ သင်း ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ပြနိုင်မလဲ
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်နည်းပြချူပ် နည်းပြအန်တွမ်နီဟေးအနေနဲ့ အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့် ဖီဖာအသိအမှတ်ပြုနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲအတွက် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ပဏာမလူစာရင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းနည်းပြချူပ်အန်တွမ်နီဟေးထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ပဏာမလူစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာ အမြင်မတူမှုတွေနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ထိုထဲမှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟောင်းတစ်ချို့နဲ့အရွေးမခံရတဲ့ ကစားသမားတစ်ချို့ပါပဏာမလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့လူစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေအဓိကပြောဆိုခဲ့တဲ့နေရာကတော့ ဂိုးသမားဘုန်းသစ္စာမင်းနဲ့သီဟထက်အောင်တို့ ပဏာမအသင်းမှာရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ နောက်ခံလူဇော်မင်းထွန်းပဏာမလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ရွေးချယ်ခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဂိုးသမားဘုန်းသစ္စာမင်းနဲ့ပြောရရင်သူ့ရဲ့အရပ်အမောင်း ၊ ပင်ကိုယ်ဟန်အနေအထားအရအများကြီး ယခုထက်ပိုပြီးဖြစ်သင့်ပေမယ့်သူ့ရဲ့ မိမိ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းတဲ့ကစားပုံနဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့လက်စွမ်းအနေအထားအပြင်အားအနည်းဆုံးအချက်ကတော့ ဂိုးသမားတစ်ယောက်မှာမရှိသင့်တဲ့ အချိန်အဆလွဲချော်မှုတွေ ၊ မတွက်ချက်တတ်မှုတွေကြောင့်ထင်ပေါ်သင့်သလောက် မထင်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယခုအနေအထားအရတော့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ သူ့ထက်ရွေးသင့်တဲ့ါဝင်လာသင့်တဲ့ဂိုးသမားတွေ အများကြီးမြန်မာဘောလုံးလောကမှာရှိနေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
သူသာ ဘောလုံးကို အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ပြီးကြိုးကြိုးစားစားကစားပြီး ခြေစွမ်းတိုးတက်လာရင်ယခုမြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့နောက်ခံကစားသမားများစွာကြားမှာ သူ့ကိုမှီတဲ့ကစားသမားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ခက်တာက သီဟထက်အောင်ရဲ့မလိုအပ်ဘဲစိတ်လိုက်မာန်ပါကစားမှုတွေစည်းကမ်းပိုင်းအားနည်းမှုတွေခြေစွမ်းပိုင်း ယခုထက်ပိုပြီးတိုးတက်မလာတာတွေအနေအထားတွေအပြင် ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားထက်ပိုလာတာ ၊ လုပ်အားနှုန်း ၊ ပြေးအားတွေယခုနောက်ပိုင်းမှာလျော့ကျလာတာတွေကသီဟထက်အောင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပါ။
သီဟထက်အောင်ဟာ Fri ထဲမှာရှိပါတယ်။သူဟာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံး မြန်မာကစားသမားတွေထဲမှာတစ်ဦးအပါအဝင်မို့ ယခုထက်ပိုပြီးကြိုးစားဖို့ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သီဟထက်အောင်ကို ပဏာမအသင်းမှာပြန်ရွေးတဲ့နည်းပြအန်တွမ်နီဟေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ကျနော် လက်ခံပါတယ်။
ဝါရင့်နောက်ခံလူဇော်မင်းထွန်းကို ပဏာမလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ရွေးချယ်ခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့တာကတော့မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေကို အံ့သြသင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
အသက်အရွယ်အရရော ၊ ခြေစွမ်းအရရောမြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ သုံးလို့ရတဲ့လိုအပ်တဲ့ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပေမယ့်ချန်ခဲ့တာကတော့ နားမလည်နိုင်စရာပါ။
ဒါပေမယ့် ဇော်မင်းထွန်းကို နည်းပြအန်တွမ်နီဟေးရဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြောစကားအရတော့ဆူဇူးကီးဖလားပြိုင်ပွဲမှာ မရွေးချယ်တော့ဘူးလို့ယူဆလို့တော့မရပါဘူး။
နည်းပြအန်တွမ်နီဟေး ပြောစကားအရ” ဇော်မင်းထွန်းဟာ ကျနော် အချိန်မရွေးယူသုံးလို့ရတဲ့ ကစားသမားမျိုးပါ ” ဆိုတဲ့ပြောစကားအနေအထားအရ ခြေစမ်းပွဲတွေမှာလူငယ်တွေကို စမ်းသုံးကြည့်ပြီးနေရာပေးချင်တာကြောင့်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
အဆင်မပြေရင်တော့ နည်းပြအန်တွမ်နီဟေးဟာ ဇော်မင်းထွန်းကို လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ပြန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
အလယ်တန်းမှာ သန်းထက်အောင်ကိုရွေးချယ်တာဟာ ကျေနပ်စရာပါ။
မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေ အဓိကကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့တာကတော့ လူငယ်ကစားသမားမြတ်ကောင်းခန့်ပါဝင်လာတာနဲ့ကျော်ကိုကိုမပါဝင်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအရွေးသင့်ဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ ကောင်းဆက်နိုင်ပါဝင်လာတာပါပဲ။
ကစားပုံအရမ်းမြန်ပြီး ပြေးအား ၊ ရုန်းအားရှိတဲ့ကစားပုံနဲ့ ကောင်းဆက်နိုင်ဟာမြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
ငွေတံဆိပ်ရခဲ့တဲ့ စင်ကာပူဆီးဂိမ်းမှာမြန်မာအသင်းတိုက်စစ်ပိုင်းထက်မြက်ခဲ့တာကောင်းဆက်နိုင်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာအများကြီးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်အမေရိကဘောလုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ ဘိုလီဗီးယားလိုအသင်းမျိုးကို ဖီဖာအသိအမှတ်ပြုခြေစမ်းပွဲကစားလို့ရအောင် စီစဉ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချူပ် MFF ကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုရမှာပါ။
ဒါဟာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းကိုနိုင်ငံတကာမှာ အသင်းရဲ့ပုံရိပ်တက်စေတာအမှန်ပါဘဲ။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းကို လူငယ်တွေနဲ့အဓိကတည်ဆောက်ချင်တဲ့ နည်းပြအန်တွမ်နီဟေးဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြနိုင်မလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
အနျ တှမျ နီ ဟေး နဲ့ မွနျ မာ အ သငျး ဘယျလောကျထိ လုပျပွနိုငျမလဲ
မွနျမာ့လကျရှေးစငျနညျးပွခြူပျ နညျးပွအနျတှမျနီဟေးအနနေဲ့ အောကျတိုဘာလအတှငျးမှာယှဉျပွိုငျကစားမယျ့ ဖီဖာအသိအမှတျပွုနိုငျငံတကာခွစေမျးပှဲနှဈပှဲအတှကျ မွနျမာ့လကျရှေးစငျအသငျးရဲ့ပဏာမလူစာရငျးကို ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျးကပဲ ထုတျပွနျကွညောခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။
မွနျမာ့လကျရှေးစငျဘောလုံးအသငျးနညျးပွခြူပျအနျတှမျနီဟေးထုတျပွနျကွညောတဲ့ပဏာမလူစာရငျးကို ထုတျပွနျကွညောပွီးအခြိနျပိုငျးအတှငျးမှာ အမွငျမတူမှုတှနေဲ့ဝဖေနျပွောဆိုမှုတှမွေငျ့တကျခဲ့တာလညျးတှခေဲ့ရပါတယျ။
ထိုထဲမှာ မွနျမာ့လကျရှေးစငျကစားသမားဟောငျးတဈခြို့နဲ့အရှေးမခံရတဲ့ ကစားသမားတဈခြို့ပါပဏာမလကျရှေးစငျအသငျးရဲ့လူစာရငျးနဲ့ပတျသကျပွီးဝဖေနျပွောဆိုမှုရှိခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာဘောလုံးပရိသတျတှအေဓိကပွောဆိုခဲ့တဲ့နရောကတော့ ဂိုးသမားဘုနျးသစ်စာမငျးနဲ့သီဟထကျအောငျတို့ ပဏာမအသငျးမှာရှေးခယျြခဲ့ခွငျးနဲ့ နောကျခံလူဇျောမငျးထှနျးပဏာမလကျရှေးစငျအသငျးမှာ ရှေးခယျြခွငျးမပွုလုပျခဲ့တာတှဖွေဈပါတယျ။
ဂိုးသမားဘုနျးသစ်စာမငျးနဲ့ပွောရရငျသူ့ရဲ့အရပျအမောငျး ၊ ပငျကိုယျဟနျအနအေထားအရအမြားကွီး ယခုထကျပိုပွီးဖွဈသငျ့ပမေယျ့သူ့ရဲ့ မိမိ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှုနညျးတဲ့ကစားပုံနဲ့မတညျငွိမျတဲ့လကျစှမျးအနအေထားအပွငျအားအနညျးဆုံးအခကျြကတော့ ဂိုးသမားတဈယောကျမှာမရှိသငျ့တဲ့ အခြိနျအဆလှဲခြျောမှုတှေ ၊ မတှကျခကျြတတျမှုတှကွေောငျ့ထငျပျေါသငျ့သလောကျ မထငျပျေါခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ယခုအနအေထားအရတော့လကျရှေးစငျအသငျးမှာ သူ့ထကျရှေးသငျ့တဲ့ါဝငျလာသငျ့တဲ့ဂိုးသမားတှေ အမြားကွီးမွနျမာဘောလုံးလောကမှာရှိနတောတော့ အမှနျပါဘဲ။
သူသာ ဘောလုံးကို အပွညျ့အဝအာရုံစိုကျပွီးကွိုးကွိုးစားစားကစားပွီး ခွစှေမျးတိုးတကျလာရငျယခုမွနျမာဘောလုံးလောကရဲ့နောကျခံကစားသမားမြားစှာကွားမှာ သူ့ကိုမှီတဲ့ကစားသမားရှိမှာမဟုတျပါဘူး။
ခကျတာက သီဟထကျအောငျရဲ့မလိုအပျဘဲစိတျလိုကျမာနျပါကစားမှုတှစေညျးကမျးပိုငျးအားနညျးမှုတှခွေစှေမျးပိုငျး ယခုထကျပိုပွီးတိုးတကျမလာတာတှအေနအေထားတှအေပွငျ ဘောလုံးသမားတဈယောကျမှာရှိသငျ့တဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားထကျပိုလာတာ ၊ လုပျအားနှုနျး ၊ ပွေးအားတှယေခုနောကျပိုငျးမှာလြော့ကလြာတာတှကေသီဟထကျအောငျရဲ့လိုအပျခကျြတှပေါ။
သီဟထကျအောငျဟာ Fri ထဲမှာရှိပါတယျ။သူဟာ ကနြျောအကွိုကျဆုံး မွနျမာကစားသမားတှထေဲမှာတဈဦးအပါအဝငျမို့ ယခုထကျပိုပွီးကွိုးစားဖို့ရေးခွငျးဖွဈပါတယျ။
သီဟထကျအောငျကို ပဏာမအသငျးမှာပွနျရှေးတဲ့နညျးပွအနျတှမျနီဟေးရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကိုတော့ကနြျော လကျခံပါတယျ။
ဝါရငျ့နောကျခံလူဇျောမငျးထှနျးကို ပဏာမလကျရှေးစငျအသငျးမှာ ရှေးခယျြခွငျးမပွုလုပျခဲ့တာကတော့မွနျမာဘောလုံးပရိသတျတှကေို အံ့သွသငျ့မှုတှဖွေဈပျေါစခေဲ့ပါတယျ။
အသကျအရှယျအရရော ၊ ခွစှေမျးအရရောမွနျမာ့လကျရှေးစငျအသငျးမှာ သုံးလို့ရတဲ့လိုအပျတဲ့ကစားသမားမြိုးဖွဈပမေယျ့ခနျြခဲ့တာကတော့ နားမလညျနိုငျစရာပါ။
ဒါပမေယျ့ ဇျောမငျးထှနျးကို နညျးပွအနျတှမျနီဟေးရဲ့ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ပွောစကားအရတော့ဆူဇူးကီးဖလားပွိုငျပှဲမှာ မရှေးခယျြတော့ဘူးလို့ယူဆလို့တော့မရပါဘူး။
နညျးပွအနျတှမျနီဟေး ပွောစကားအရ” ဇျောမငျးထှနျးဟာ ကနြျော အခြိနျမရှေးယူသုံးလို့ရတဲ့ ကစားသမားမြိုးပါ ” ဆိုတဲ့ပွောစကားအနအေထားအရ ခွစေမျးပှဲတှမှောလူငယျတှကေို စမျးသုံးကွညျ့ပွီးနရောပေးခငျြတာကွောငျ့လို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။
အဆငျမပွရေငျတော့ နညျးပွအနျတှမျနီဟေးဟာ ဇျောမငျးထှနျးကို လကျရှေးစငျအသငျးမှာ ပွနျချေါပါလိမျ့မယျ။
အလယျတနျးမှာ သနျးထကျအောငျကိုရှေးခယျြတာဟာ ကနြေပျစရာပါ။
မွနျမာဘောလုံးပရိသတျတှေ အဓိကကနြေပျစရာဖွဈခဲ့တာကတော့ လူငယျကစားသမားမွတျကောငျးခနျ့ပါဝငျလာတာနဲ့ကြျောကိုကိုမပါဝငျတဲ့တိုကျစဈပိုငျးမှာအရှေးသငျ့ဆုံးကစားသမားဖွဈတဲ့ ကောငျးဆကျနိုငျပါဝငျလာတာပါပဲ။
ကစားပုံအရမျးမွနျပွီး ပွေးအား ၊ ရုနျးအားရှိတဲ့ကစားပုံနဲ့ ကောငျးဆကျနိုငျဟာမွနျမာ့လကျရှေးစငျအသငျးမှာ တိုကျစဈပိုငျးအတှကျလိုအပျနတေဲ့ကစားသမားဖွဈပါတယျ။
ငှတေံဆိပျရခဲ့တဲ့ စငျကာပူဆီးဂိမျးမှာမွနျမာအသငျးတိုကျစဈပိုငျးထကျမွကျခဲ့တာကောငျးဆကျနိုငျရဲ့ အခနျးကဏ်ဍဟာအမြားကွီးပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
တောငျအမရေိကဘောလုံးအသငျးဖွဈတဲ့ ဘိုလီဗီးယားလိုအသငျးမြိုးကို ဖီဖာအသိအမှတျပွုခွစေမျးပှဲကစားလို့ရအောငျ စီစဉျခဲ့တဲ့မွနျမာနိုငျငံဘောလုံးအဖှဲ့ခြူပျ MFF ကိုလညျးအသိအမှတျပွုရမှာပါ။
ဒါဟာ မွနျမာ့လကျရှေးစငျဘောလုံးအသငျးကိုနိုငျငံတကာမှာ အသငျးရဲ့ပုံရိပျတကျစတောအမှနျပါဘဲ။
မွနျမာ့လကျရှေးစငျအသငျးကို လူငယျတှနေဲ့အဓိကတညျဆောကျခငျြတဲ့ နညျးပွအနျတှမျနီဟေးဘယျလောကျထိလုပျပွနိုငျမလဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
တစ်ခေတ် တစ်ယောက် !!!
မိခင်ကိုဦးထိပ်ပန်ဆင်တဲ့ သားအတွက် စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုဏ်ပြုခြင်း ခံလိုက်ရတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် !!!
This Month : 33723
This Year : 175180
Total Users : 534204
Total views : 2416413